Ajụjụ - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
A na-arụpụta ma na-ere ngwaahịa anyị site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'onwe ya. Mmadụ Bịa ka anyị factory nwere a nleta.
Kedu ka ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe si sie ike?
Anyị bụ onye ndu nke ụlọ ọrụ PVC nsu na China, anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa kachasị mma yana ọnụahịa kachasị asọmpi. Ndị mmekọ anyị nọ n'akụkụ ụwa niile, isi ahịa anyị bụ North America, South America, Canada, Europe, Australia, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe, na South Africa.
Nwere ike ịnye ihe nlele?
Anyị nwere ike inye free obere iberibe nke ịkpụ samples n'ihi na ị na-eme ule. Naanị ị ga-akwụ ụgwọ maka ego ozi ahụ. Anyị nwekwara ike ịnye otu ụdị ihe atụ. A ga-akwụghachi ụgwọ nke samples mgbe ị debere iwu ahụ.
T / T, VISA, MasterCard, ịlele L / C, DIA, D / P, Western Union ịkwụ ụgwọ. Anyị nwekwara ike ide akwụkwọ ozi mkpuchi maka Alibaba, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ozugbo na Alibaba.